Mapurisa Anopiwa Mvumo neDare Kuti Arambe Akachengeta Pius Jamba, Murume Ari Kuferefetwa Mhosva yeKuponda Muzvare Moreblessing Ali
Chikumi 17, 2022
Nhengo yebato reCitizens Coalition for Change, Muzvare Moreblessing Ali, avo vanonzi vakapondwa naPius Jamba musi wa 24 Chivabvu.
Mapurisa apihwa mvumo nedare ramejasitiriti kuti arambe akachengeta Pius Jamba apo ari kuferefeta nyaya yaari kupomerwa yekuuraya Muzvare Moreblessing Ali.
Dare rarambawo chikumbiro chekuti rirase nyaya yemutungamiri weAlmagamated Rural Teachers Union OF Zimbabwe, VaObert Masaraure, avo vari kupomerwa mhosva yekuuraya mumwe wavo muna 2016.
Mupurisa ari kutungamira kuferefetwa kwenyaya yaJamba, VaAlimon Mirimo, vaudza dare kuti vanoda nguva vaina Jamba uyo ane makore makumi matatu nerimwe, vachiti haasati avaratidza paakaparira mhosva yake uyewo haasati avaratidza banga kana zvimwe zvaakashandisa mukuuraya Muzvare Ali.
VaMirimo vatiwo vanoda kuti Jamba avabatsire kutsvaga mbozhanhare yemufi.
Jamba, uyo ange asina gweta, haana kupikisa chikumbiro chemapurisa nekudaro dare rapa mvumo yekuti arambe ari muchitokisi achibatsira mapurisa kusvika nenguva dza 3 mangwana masikati apo achadzoka kudare zvekare.
Mune imwewo nyaya yange iri kumatare, dare raramba chikumbiro chekuti rirase nyaya yemutungamiri weAlmagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaMasaraure, avo vari kupomerwa mhosva yekuuraya VaRoy Issa muna 2016.
VaMasaraure vakaita chikumbiro ichi nezuro gweta ravo VaDougie Coltart vachiti painge pasina humbowo hunoratidza kuti vakapara mhosva yavari kupomera.
VaColart vakaudza dare kuti ongororo yekufa kwaVa Issa yakaitwa nedare muna2016 mekare yakachenura VaMasaraure.
Dare rati VaMasaraure vanofanira kuenda kudare repamusoro nechikumbiro chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba.
VaMasaraure vanzi vadzoke kudare musi wa1 mwedzi unouya apo vachazopihwa zuva rekutongwa kwenyaya yavo.
Nyaya yemumiriri weZengesa West muparamende VaJob Sikhala pamwe neemumiriri weChitungwiza North VaGodfrey Sithole, avo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yange ichiri kuenderera mberi kumatare.
Vaviri ava vari kuda kupihwa mukana kwekubhadhara mari yechibatiso kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba.
Muine imwewo nyaya, komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa muparamende, yeCommittee on Standing Rules and Orders nhasi yabvunzurudza vanhu makumi matatu nevaviri avo vari kuda zvigaro zvitanhatu zvichasara zvisina vanhu muZimbabwee Electoral Commission, apo temu yemakomishina matanhatu inopera kupera kwemwedzi unouuya.
Vamwe vapinda mubvunzo idzi vanosanganisira Amai Constance Chigwamba avo vakamboita munyori mubazi redzidzo yepasi uyewo vakamboshanda kuZEC, Engineer Patrick Chitaka avo vakaimboita seneta, mubatsiri waVaDouglas Mwonzora, VaEnerst Nyamukachi pamwe naDoctor Ngoni Kundidzora.
VaKudzidzora vanotove komishena muZEC asi temu yavo yekutanga inopera mwedzi unouya uye vari kuda kuita temu yechipiri sezvo mutemo uchibvumidza kuti munhu anokwanisa kuita matemu maviri ari komishina muZEC.
Gurukotra rezvemutemo avo vanove nhengo yekomiti yeStanding Rules and Order, VaZiyambi Ziyambi, vaudza Studio 7 kuti vachadoma vanhu gumi nevasere voendesa mazita avo kumutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa kuti vadome vanhu vatanhatu vanotora zvigaro izvi.
Pavanhu vari kusiya basa kuZEC, vana vavo madzimai uye VaZiyambi vati zvingave zvakanaka kana madzimai vakawanda vakakundawo mubvunzo dzanhasi.
Makomishina ari kusiya basa mwedzi unouya ndiAmai Joyce Kazembe, Amai Sibongile Ndlovu, Amai Netsai Mushonga, Amai Faith Sebata, VaNgoni Kundidzora naVaDaniel John Chigaru.
Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwesarudzo dzinoti kunyange hazvo pakave nemakomishina matsva, chinodiwa kuti sarudzo dziite dzakachena kuvandudza mutemo wesarudzo pamwe nekuti ZEC itevedze mutemo nekuita basa isina divi rayakarerekera.